အချစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင် နှစ်ကား - For Her Myanmar
အချစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင် နှစ်ကား
ဒီတစ်ခါတော့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေဘက်လှည့်ရအောင် ယောင်းတို့ရေ.. အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ အဖြေမရှိဖြစ်နေတဲ့ ယောင်းတို့တော့ ဒီကားလေးတွေ ကြည့်ကို ကြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောပါရစေနော်…
‘အချစ်ဆိုတာဘာလဲဟင်? ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲသိချင်တယ်။ အချစ်ကချိုလား? ခါးလား? ဘယ်လိုခံစားရလဲဟင်? ငါ့မှာလဲရည်းစားသာရှိနေတာ အချစ်ဆိုတာဘာလဲမသိဖူးဟယ်’ စသည်ဖြင့်ကြားဖူးကြမှာပေါ့နော်။ ယောင်းတို့ရောအချစ်ကိုဘယ်လိုလို့ထင်လဲ? အကယ်၍ အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်တတ်သေးရင် အခုနှင်း Review ရေးပေးမယ့်ရုပ်ရှင်လေးနှစ်ကားကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
အိန္ဒိယကားလေးတွေခဏခဏကြည့်တတ်တဲ့ယောင်းတို့ ဒီမင်းသားကိုသိကြမှာပါ။ မင်းသားကြီး Shah Rukh Khan နဲ့အတူ မင်းသမီး Katrina Kaif နဲ့ Anushka Sharma တို့ကပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုးနဲ့အတူ ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကယောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကို ရုပ်ရှင်ကားအဆုံးထိခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
မင်းသား Khan ဟာလန်ဒန်မှာအလုပ်လာလုပ်ရင်း တစ်နေ့မှာ Church ကျောင်းရဲ့နှင်းတွေကိုရှင်းနေတုန်း မင်းသမီး Kaif ကလှလှပပဝတ်စားပြီးကားအကောင်းစားထဲကအလောတကြီးပြေးထွက်ရင်းဝတ်ပြုဆုတောင်းနေတာကိုသွားနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kaif မှာထူးခြားတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဘုရားသခင်နဲ့ အပေးအယူလုပ်တာပါပဲ။ သူ့လက်နဲ့မစွမ်းဆောင်နိုင်သမျှကို ကံကိုပုံပီးဘုရားသခင်နဲ့ အလဲအထပ်ပြုတတ်တဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲမင်းသား Khan နဲ့ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ? မင်းသား Khan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော သူကဘာတွေအလဲအထပ်ပြုလိုက်မှာလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါဘဲနော်။
နောက်ပြီးဇာတ်လမ်းထဲမှာ Akira ဆိုတဲ့သတင်းထောက်မလေးတစ်ယောက်ကလည်း အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါနေပါသေးတယ်။ Akira ဟာ ‘Do u dare’ Challenges တွေကိုဖစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့အေးစက်နေတဲ့ရေတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ထဲအဝတ်မပါဘဲခုန်ဆင်းတဲ့အချိန် အေးလွန်းလို့သူရေနစ်သွားတဲ့အချိန် Khan ကဝင်ဆယ်ပေးရင်း Khan ရဲ့အနွေးထည်ကိုချွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုအမှတ်မထင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာရောဘာတွေရေးထားမှာလဲ? သူတို့သုံးယောက် ဇာတ်လမ်းကရော ဘယ်လိုဆက်စပ်သွာမှာလဲဆိုတာတွေကို မပျင်းရအောင်၊ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင် ရိုက်ပြထားတာ တွေ့ရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ..
Related Article >>> ဘောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့ ဝိတ်ချနည်းများ
2015 ခုနှစ်ကပြသခဲ့တဲ့ အော်စကာဆုရအန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကျောရိုးကိုအခြေခံထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို အခြေခံပီးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်လို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ယောင်းရေ။ လူအင်အားမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လူ့သဘောသဘာဝတချို့ကို ဖော်ပြသွားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ၁၈ရာစုအစပိုင်းမှာ နယ်မြေတွေချဲ့ထွင်နေတဲ့အင်အားကြီးပဒေသရာဇ်က Peshwa လို့သူတို့အခေါ် စစ်သူကြီးကျဆုံးသွားတဲ့အတွက် အသစ်တင်မြှောက်ဖို့လူရွေးကြပါတယ်။ အရည်အချင်းပြပွဲမှာအရင်စစ်သူကြီးရဲ့သားလဲပါဝင်ခဲ့ပြီး အထင်အမြင်သေးတဲ့တခြားအရာရှိတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကြားကနေ အရည်အချင်းအစစ်အမှန်ကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Bajirao လို့ခေါ်တဲ့ဒီစစ်သူကြီးဟာအာဏာ၊ ဥစ္စာ၊ အရည်အချင်း စသည်ဖြင့် အရာရာမှာ ကောင်းခြင်းတွေနဲ့သာပြည့်စုံခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလဲ Kashi လို့ခေါ်တဲ့သူ့အပေါ်တာဝန်ကျေလွန်း ချစ်လွန်းတဲ့ဇနီးလေးတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ စစ်သူကြီး Bajirao ကနိုင်ငံအသစ်ကိုသွားသိမ်းတဲ့လမ်းမှာ ယောက်ျားစစ်သည်ယောင်ဆောင်ပြီး သူတို့နိုင်ငံမှာကျနေတဲ့ဘေးကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ကူညီတိုက်ပေးဖို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လာတောင်းဆိုတဲ့ ‘Mastani’ အပေါ်မေတ္တာသက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ‘Mastani’ တို့နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအတိုင်းလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီး ‘Mastani’ ကလဲလက်ခံခဲ့တယ်။ ‘Bajirao’ ပြန်သွားတဲ့အခါအချစ်နွံထဲနစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ‘Mastani’ ကလဲသူ့နိုင်ငံကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ‘Bajirao’ ရဲ့မိခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ‘Mastani’ ဘယ်လိုဆက်ဆံခံရမလဲ? Bajirao’ ရဲ့ဇနီးကရောဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ? နောက်ဆုံး ‘ Bajirao’ ကရောဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကို အသည်းတယားယားနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားကပေါက်ဖွားလာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ ဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စရာပါပဲ.. ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့ Deepika Padukone ၊ Priyanka Chopra တို့နဲ့ မင်းသား Ranveer Singh တို့ပါယောင်းတို့ရေ.. ဒီနာမည်တွေကြားလိုက်တာနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မညံ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ယုံပြီဟုတ်?
ကဲ…ယောင်းတို့ရေ။ ဒီဇာတ်ကားလေးနှစ်ကားကိုကြည့်ပြီးအချစ်ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရတာလဲ? ကိုယ်သိထားတဲ့ချစ်ခြင်းဆိုတာကရောမှန်ကန်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီလားစသည်ဖြင့်ပြန်သုံးသပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘဲနှင်းညွှန်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။ အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ယောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာလေးတွေသာယာနိုင်ကြပါစေ။
Breadwinner (သို့မဟုတ်) ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းကို တော်လှန်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း
အားလပ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရင်းကြည့်ဖို့ ဇာတ်ကားကောင်း (၃)ကား